Ibhodi yezitshixo kaGoogle Gboard isungule izixhobo ze-Android | Iindaba zeGajethi
Ewe kunokubonakala kungaqhelekanga kodwa le keyboard ibikhe yajikeleza okwethutyana kubasebenzisi bezixhobo ezinenkqubo yokusebenza ye-iOS, sele ifikile kubasebenzisi be-Android. Le yibhodi yezitshixo eyongeza isandla esongezayo kwikhibhodi yoqobo ye-smartphone yethu kwaye ngokungathandabuzekiyo kucetyiswa kakhulu ukuba uyizame ubungakanani bemisebenzi eyongezayo.
Faka ii-GIF kwimiyalezo, iilwimi ezi-3 ngaxeshanye zokuxela kwangaphambili, injini yokukhangela edibeneyo, iingcebiso zonxibelelwano okanye iindlela ezimfutshane. Oku ziyinxalenye nje yokhetho olongezwe yile keyboard ikhulu eyakhutshwa kuqala kubasebenzisi be-iOS kwaye ngoku iyafumaneka kubasebenzisi be-Android, nangona kuyinyani ukuba kufuneka ukhuphele i-APK ngokuthe ngqo kuba ayifumaneki ngokusemthethweni kuGoogle Play.
Ukongeza kolu phuculo, into esinayo yi ukunika igama kwakhona nokutshintsha i-icon yeapp Ukutshatisa usetyenziso olukhoyo kwi-iOS, olushiye kwiGboard kunye nokudibanisa ulungiso lwebug oluqhelekileyo kwisicelo. Le yi Ikhonkco lokukhuphela iMirror Sukuba nexhala, kukukhutshelwa ngokukhuselekileyo ngokupheleleyo.
Kwakumangalisa kakhulu kuthi ukubona esi sicelo kwizixhobo ze-iOS kwaye singasiboni kwizixhobo ze-Android, kodwa ngoku olu hlaziyo lutsha lufikile ukuze lubandakanye izibonelelo zenye yezona zitshixo zibalulekileyo sizibonileyo nesizisebenzisileyo. Inguqulelo entsha yi-6.0.65 kunye Isebenza kuphela kwiiprosesa ezingama-64 ze-ARM ezinenguqulo ye-Android 5.1 okanye ngaphezulu. Ukuba sinenguqulo yangaphambili efakwe kwisixhobo sethu siya kuba nakho ukuyifaka ngokungathi sisimo esiqhelekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Ikhibhodi yeGoogle Gboard isungula izixhobo ze-Android